Dekedda Bossaso oo maalintii labaad hawlgab ah (dhegayso) – Radio Daljir
Oktoobar 26, 2017 1:55 g 1
Dekedda Bossaso oo ah isha ugu wayn ee dhaqaale ee Puntland ayaa xiran maalintii labaad, kadib markii ganacsatadu ay diideen in ay bixiyaan khidmad lagu soo rogay cunatada iyo cabitaanada imaanaya dekedda oo ah lacago ay ku soo rogtay hay’adda tayodhowrka Puntland.
Ganacsatada iyo hay’adda ayaa ku kala aragti duwan khidmadda laga qaadayo ganacsatada alaabaha kala soo dega dekedda Bosaso, taasi oo abuurtay in aanay shalay iyo maanta dekedda aan waxba lagala soo degin, lagana dhoofin.
Cabdicasiis Ducaalle Gaafuun oo ka mid ah ganacsatada wax kala soo dega dekedda oo la hadlay Daljir ayaa sheegay in ganacsatada aysan bixin karin kharash lagu baaro cuntooyinka iyo cabitaanada dekedda imaanaya, isaga oo xusay in ay bixiyaan canshuur, sidaasi darteed dowladda aanay ka qaadin wax khidmadda shaybaarada cuntada iyo cabitaanada.
Halkaan kadhegayso ganacsadaha
Dhanka kale agaasimaha guud ee hay’adda tayodhowrka Puntland Cabdicasiis Maxamed Xirsi oo la hadlay Daljir ayaa ku sheegay dadka diidan khidmadda inay yihiin ganacsato tiro yar oo diiday in cuntadoooda iyo cabitaanadooda la baaro, balse dhaqdhaqaaqa ganacsi ee dekedda uu yahay mid shaqeeynaya oo ganacsatada badankood ay u hogaansameen bixinta khidmadda.
Sida ay xaqiijiyeen wariyayaasha Radio Daljir oo tagay dekedda ayaa soo warinaya in shalay iyo maantaba aysan socon wax dhaqdhaqaaq ah, dhoofin iyo soodejin toona (arag masawirka kore).
Halkaan kadhegayso agaasimaha
Muna Collow 3 years ago
Anisa Eme Cabdi Aziiz Ollow